Ungayenza kanjani i-smartphone yakho ikuxwayise lapho ukude ne-1 km ukusuka ekhaya | Izindaba zamagajethi
Ungayenza kanjani i-smartphone yakho ikuxwayise uma ukude ne-1 km ekhaya
UPaco L Gutierrez | | General, AmaSelula
Ukwehla kwezinga sekuqalile, kancane kancane sizophuma endlini sihambe nezingane zethu, sizilolonge noma sihambehamba. Baningi abaseSpain abazimisele ukushiya amakhaya nganoma yisiphi isizathu, manje akudingekile, ngoba uhulumeni ukumemezele lokho Kusukela ngoMeyi 2, kuvunyelwe ukuhambahamba noma ukudlala imidlalo ihora elilodwa endaweni eyi-1km. Lesi yisinyathelo esisha esijoyina leso sokukwazi ukuphuma nabancane.
Inkinga iza kulelo khilomitha ongeke weqe kulo, ngoba isikhathi sanele ukubheka iwashi, kepha inkinga ye-mileage ayilula kangako. Kungenzeka ubale leli banga kwi-PC yakho noma iselula ngaphambi kokuphuma ekhaya noma ngenkathi wehla ngomgwaqo. Kulesi sihloko sizochaza ukuthi ungayisetha kanjani i-alamu ku-smartphone yakho ukukuxwayisa ukuthi weqe ibanga elivunyelwe, sisebenzisa kulokhu i-GPS yesiginali sethu. Ngale ndlela sizogwema izinhlawulo ezingaba khona (into ebalulekile eza kithi).
1 I-alamu yeqe ikhilomitha ku-iPhone yethu
2 Ungakwenza kanjani kwi-smartphone yethu ye-Android
2.1 Uhlobo lokukhokha lwe-Premium
I-alamu yeqe ikhilomitha ku-iPhone yethu
Ku-iPhone yethu sinendlela yomdabu futhi elula yokufeza lokhu. Sizobheka ukuphela kwethu ukuthola uhlelo lokusebenza «Izikhumbuzi»Futhi sizocindezela inketho kusigaba se-«namuhla«, Bese sizovula isikhumbuzi esisha, ukufaka umugqa omusha lapho ungabeka khona igama olifunayo kusikhumbuzi. Lapho, chofoza inkinobho i ngakwesokudla kwesikhumbuzi ukufaka isikrini semininingwane, lapho singakwazi khona ukumisa imingcele ehlukile.
Lapha sizokwazi ukumisa konke esikudingayo, sizoqala ngesikhathi, kulokhu sizocindezela lapho ibeka khona i-alamu futhi sizokwenza kusebenze inketho «ungazise ihora elilodwa«, Sizobeka isikhathi esinqume ukushiya ngaso ikhaya. Ukuze ngale ndlela sibe nesaziso sohlelo kanye nebanga. Ngale ndlela sithatha ithuba lokuthi futhi sibe nesaziso sesikhathi okufanele sibuye ngaso.
Manje sizolungisa imingcele yendawo ngokucindezela lapho ithi "ngazise endaweni", lapho sizocofa khona "indawo" sisebenzisa indawo yendlu yethu. Okulandelayo, into yokuqala okufanele uyenze setha indawo yakho yasekhaya noma indawo yokuqala kusuka lapho ukukala ibanga elingu-1 km. Uma usekhaya, ungachofoza ku- "indawo yamanje". Futhi uma kungenjalo, ungasebenzisa injini yokusesha ngenhla lapho izindawo zethu ezigciniwe zizotholakala khona.
Ngemuva kokukhetha indawo yokuqala, imephu izovela ngezansi. Kule mephu, kufanele siqale chofoza inkinobho «lapho uphuma» ukusetha isikhumbuzi lapho ushiya ipherimitha elithile. Ngemuva kwalokho kuzodingeka uhudule iphuzu elimnyama lombuthano ezungeze indawo okuyo ize ibe yikhilomitha eli-1 ukusuka lapho ukuze ikwazi ukubala leyo radius ofuna ukuhamba kuyo. Manje, vele ubuyele emuva ku- «Imininingwane»Futhi konke kuzolungiswa.
Ungakwenza kanjani kwi-smartphone yethu ye-Android
Ukusetha i-alamu ekuxwayisa uma uya kude kakhulu ne-Android ngeke kube lula kangako, kuzodingeka sisebenzise uhlelo lomuntu wesithathu olubizwa Ngivuse Lapho. Ngakho-ke, into yokuqala esizoyenza landa uhlelo lokusebenza funa -Google Play. Lapho isicelo sesifakiwe, sizoyivula kwi-smartphone yethu. Ekuvulweni kokuqala kwesicelo esishiwoyo, into yokuqala esizoyibona kuzoba yisikrini sokumisa lapho kufanele khona nquma ulimi, amayunithi webanga, nesihloko ufuna ukusebenzisa. Ngokuzenzakalelayo yonke into kufanele ihlelwe kahle, okungukuthi, chofoza ku- Gcina.
Uma sesikrinini elikhulu. Sizocindezela inkinobho ukudala i-alamu ye-GPS onayo ngezansi kwesokudla nesithonjana sephini yakudala ye-GPS enophawu lokuhlanganisa ngaphakathi, kuzovela izinketho eziningana futhi sizobona phakathi kwazo eyodwa ezothi uma ishiya (i-COVID), kube yiyo esizoyikhetha. Isikhathi sokuqala lapho sihamba ukusetha i-alamu, kuzofanele sinikeze imvume ejwayelekile kulesicelo ukufinyelela indawo ye-smartphone yethu. Ngokulandelayo sizobona imephu, lapho kufanele senzeke khona chofoza endaweni yokuphuma Sisuka lapho sifuna ukubopha ikhilomitha esingakwazi ukudlula kulo. Ichashazi eliluhlaza okwesibhakabhaka lizovela ebalazweni ngendawo yethu yamanje.
Lapho sesikhethe indawo yethu ngokubeka iphini elibomvu ezansi kwesikrini kufanele uhambise ibha ye-Perimeter ukuyibeka ku-1 km. Ngemuva kwalokho Sizocofa kunketho ekungeneni ukuyishintshela ku-On leaving bese ugcine izinguquko ngokuchofoza ku- "Gcina". Ngemuva kokuchofoza ku-save, singabeka i-nomenclature ku-alamu. Kuzilungiselelo singashintsha amanye amapharamitha. Iseluleko sami ukuthi sehlise imvamisa yokuvuselela isikhundla sethu ngoba ngenxa yalokhu ibhethri lethu lingakhipha okungaphezu kokujwayelekile, kubangele ukuphela kwethu kukhuphuke ekushiseni.
Idizayinelwe ukuhamba ngemoto, ngakho-ke uma sihamba ngezinyawo akudingekile ukuthi sibuyekeze kaningi kangaka. Khumbula ukuthi ukuze uhlelo lokusebenza lusebenze kahle, kuzofanele ngaso sonke isikhathi ukuthi senziwe sisebenze ngaphandle kohlobo oluthile lwemodi yokonga (Lokhu kungadala ukuthi uhlelo lokusebenza luyeke inqubo yalo yangemuva.) Sinezingqikithi ezikhanyayo kanye netimu emnyama etholakalayo, singayikhetha ukuze sisebenzise izikrini ze-Oled zamatheminali ethu noma nje ngokuthanda komuntu siqu.
Uhlobo lokukhokha lwe-Premium
Uhlelo lokusebenza lumahhala, kepha lunezikhangiso, ukukhangisa okungasuswa uma sifinyelela inketho yakho yokukhokha. Kuzilungiselelo sizothola isigaba esibizwa nge- "Premium", lapho uzothola khona inketho "susa ukukhangisa", uma sifinyelela Singathenga uhlobo olukhokhelwe ngo- € 1,99. Ngale ndlela sizokugwema ukubhekana nezikhangiso ezicasulayo. Lolu hlelo lokusebenza lunokusetshenziswa okuningi, njengokusazisa lapho sifika esitobhini sethu lapho sisebenzisa izithuthi zomphakathi futhi ngaleyo ndlela sigweme ukusidlula.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ungayenza kanjani i-smartphone yakho ikuxwayise uma ukude ne-1 km ekhaya